Kooxda madaniga ah
Cilmi baaris / Maqaallo
Mudane Tian iyo kooxdiisu waxay ugu horreyn diiradda saarayaan bixinta adeegyo sharciyeed oo ajnabi la xiriira macaamiisha ka ganacsata ama la leh Shiinaha adduunka oo dhan.
Adeegyadeena waxaa asal ahaan loo kala saaraa laba qaybood oo ku saleysan noocyada macaamiisha: adeegyada macaamiisha shirkadaha, iyo adeegyada shakhsiyaadka, oo ay ku jiraan qurbajoogta Shiinaha, gaar ahaan Shanghai.
Macaamiisha Shirkadaha / Ganacsiyada
Markaanu nahay koox yar, kuma faaneyno adeegyo dhameystiran, adeegyo sharci oo dhameystiran, halkii, waxaan dooneynaa inaan muujino diiradeena iyo awooddeena halka aan kaga fiicnaan karno kuwa kale.
1. Maalgashiga Dibadda ee Dibadda
Waxaan ka caawinnaa maalgashadayaasha shisheeye sameynta joogitaankooda ganacsi ee ugu horeeya Shiinaha adoo aasaasaya shirkadooda ganacsi ee Shiinaha, oo ay kujiraan xafiiska wakiilka, laanta ganacsiga, iskaashiyada Sino-shisheeye (sinaanta JV ama qandaraaska JV), WFOE (gebi ahaanba shirkadaha shisheeye), iskaashi , maalgelin.
Intaa waxaa dheer, waxaan sameynaa M&A, ka caawinta maalgashadayaasha shisheeye helitaanka shirkadaha gudaha, shirkadaha, iyo hantida hawlgalka.
2. Sharciga Dhismooyinka
Tani waa mid ka mid ah meelihii aan ku soo barannay ee aan ku soo aragnay khibrad iyo khibrad hodan ah. Waxaan ka caawinnaa macaamiisha:
(1) kaqeyb qaadashada nidaamka qandaraaska dadweynaha ee iibinta xaq u isticmaalka dhulka si loo helo dhul la doonayo oo loogu talagalay horumarinta hantida ama ujeedooyin warshadeed sida warshado dhisme, bakhaarro iwm;
(2) dhex mushaaxidda sharciyada culus iyo kuwa caajisnimada leh iyo xeerarka la xiriira horumarinta mashruuca dhismaha, guryaha la deggan yahay ama kuwa ganacsiga, gaar ahaan aagagga magaalooyinka iyo sharciyada dhismaha;
(3) helitaanka iyo iibsashada guryaha jira, dhismayaasha sida guryaha adeegga, dhismaha xafiisyada iyo guryaha ganacsiga, oo ay kujirto sameynta baaritaan taxaddar leh oo ku saabsan guryaha laga hadlayo, qaab dhismeedka heshiiska, canshuuraha iyo maareynta hantida;
(4) maalgelinta mashruuca dhismaha, amaahda bangiga, maalgelinta aaminka;
(5) maalgashiga guryaha ee guryaha Shiinaha, iyagoo raadinaya fursado ayagoo ka wakiil ah maalgashadayaasha shisheeye si dib u habeyn loogu sameeyo, dib loogu qurxiyo, dibna loogu suuq geeyo isla guryahaas.
(6) kireynta guryaha / kireynta guryaha, kireynta guryaha, xafiisyada iyo ujeedooyinka warshadaha.
3. Xeerka Guud ee Shirkadaha
Marka laga hadlayo adeegyada guud ee sharciga ee shirkadaha, marar badan waxaan galnaa heshiis sanadle ah ama sanadle ah oo ilaaliyeyaal ah oo aan la galno macaamiil aan hoostagno oo aan ku siino waxyaabo kala duwan oo ah adeegyada la-talinta sharciga, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn:
(1) isbeddelada guud ee shirkadaha ee ku saabsan baaxadda ganacsiga shirkadaha, cinwaanka xafiiska, magaca shirkadda, raasumaalka diiwaangashan, daah-furka laanta ganacsiga;
(2) la talinta maamulka shirkadaha, dejinta sharciyada xukuma howlgalka kulanka saamileyda, kulanka guddiga, wakiilka sharciga iyo maareeyaha guud, xeerarka xukuma isticmaalka shaabadda / jarista shirkadaha, iyo xeerarka la xiriira dhiirigelinta maamulka;
(3) la talinta arrimaha shaqada iyo shaqaalaha ee macaamiisha, dib u eegista qandaraasyada shaqada iyo xeerarka shaqaalaha heerar kala duwan, qoritaanka buuga shaqaalaha, shaqo ka joojinta tirada badan, iyo heshiisiinta shaqaalaha iyo dacwadaha;
(4) la talinta, qoritaanka, dib u eegista, hagaajinta dhammaan noocyada qandaraasyada ganacsiga ee loo adeegsado hawlgallada ganacsi ee macaamilka ee lala leeyahay dhinacyada saddexaad;
(5) la talinta arrimaha cashuuraha ee ku saabsan meheradaha macaamiisha.
(6) bixinta talo sharciyeed oo ku saabsan xeeladaha horumarinta macaamiisha ku nool dhulweynaha Shiinaha;
(7) bixinta talobixin sharciyeed oo ku saabsan arrimaha xuquuqda hantida aqooneed, oo ay ku jiraan dalabka, wareejinta iyo liisanka patentka, calaamadaha ganacsiga, xuquuqda daabacaadda iyo kuwa kale;
(8) dib u soo celinta lacagihii la iska rabay taas oo ay waajib ku tahay iyadoo loo diro waraaqaha qareenka macaamiisha;
(9) diyaarinta, dib u eegista qandaraasyada kireysiga ama qandaraasyada iibka ee guryaha la kireeyay ama ay leeyihiin macaamiisha xafiisyadooda ama saldhigyadooda wax soo saar;
(10) la macaamilka macaamiisha macmiilkiisa sheegashooyin aan fiicnayn, iyo bixinta latalin sharci oo khuseysa;
(11) isku-duwidda iyo dhexdhexaadinta khilaafaadka u dhexeeya macaamiisha iyo maamulka dawladda;
(12) bixinta macluumaadka sharciyeynta ee ku saabsan sharciyada iyo xeerarka PRC ee khuseeya howlaha ganacsi ee macmiilka; iyo ka caawinta shaqaalaheeda inay si fiican u fahmaan isla;
(13) kaqeybgalka wadaxaajoodka udhaxeeya macmiilka iyo cidkasta oo sedexaad ah arimaha ku saabsan isku biiritaanka, helitaanka, iskaashiga wadajirka ah, dib u habeynta, isbahaysiga ganacsiga, wareejinta hantida iyo deymaha, lacag la aanta iyo daadinta;
(14) ku sameynta baaritaan taxaddar leh macaamiisha la-hawlgalayaasha ganacsiga iyadoo la raadinayo diiwaanno shirkadeed ee la-hawlgalayaasha noocan oo kale ah oo lala hayo xafiiska warshadaha iyo ganacsiga maxalliga ah;
(15) bixinta adeegga sharciga iyo / ama kaqeybgalka gorgortanka khilaafaadka iyo khilaafaadka;
(16) bixinta adeegyo tababar sharci iyo muxaadarooyin ku saabsan sharciyada PRC ee macaamiisha iyo shaqaalaha.
4. Garqaad iyo Dacwad
Waxaan ka caawinnaa macaamiisha caalamiga ah qabashada garnaqsiga iyo dacwadaha ka socda Shiinaha ee ku aaddan daba-galka, ilaalinta iyo ilaalinta danahooda Shiinaha. Waxaan ku mataleynaa macaamiisha caalamiga ah ku dhowaad dhammaan noocyada khilaafaadka ee ku xiran awoodda maxkamadaha Shiinaha, sida khilaafaadka wadajirka ah, calaamadaha ganacsiga, iibka caalamiga iyo iibsiga, qandaraaska bixinta, heshiisyada ruqsadaha IPR, ganacsiga caalamiga ah iyo khilaafaadka kale ee ganacsiga ee dhinacyada Shiinaha.
Shaqsiyaadka / Ajaanibta / Shisheeyaha
Qeybtaan waxqabad, waxaan ku bixinaa adeegyo badan oo kala duwan oo sharciga madaniga ah oo ay si joogto ah ugu baahan yihiin macaamiisha shaqsiyeed.
1. Sharciga Qoyska
Waxaan ka caawiyey ajaanib badan ama ajaanib dalka Shiinaha dhibaatooyinkooda ka dhasha lamaanaha, xubnaha qoyska. Tusaale ahaan:
(1) diyaarinta heshiisyadooda kahoreeyay kahor caruusadooda iyo aroosada kuwaas oo inta badan ah ragga ama dumarka Shiinaha, iyo sameynta qorshe qoys kale oo ku saabsan nolosha guurka mustaqbalka;
(2) kula talinta macaamiisha furiinkooda Shiinaha adoo dejinaya istiraatiijiyadooda furitaanka si ay u ilaashadaan danahooda iyadoo la tixraacayo sharciyo badan oo ku lug leh dacwadaha oo inta badan carqaladeeya habka furitaanka; talo bixin ku saabsan kala qeybinta, qeybsiga hantida guurka, guryaha bulshada;
(3) talo ka bixinta xannaaneynta carruurta, ilaalinteeda iyo dayactirka;
(4) adeegyada qorshaynta guryaha ee qoyska marka loo eego hantida qoyska ama guryaha ku yaal Shiinaha kahor khiyaanada.
2. Sharciga Dhaxalka
Waxaan ka caawinaa macaamiisha dhaxalka, dardaaran ama sharci ahaan, dhaxalka ama dhaxalka ama dhaxalka ay ka heleen gacaliyahooda, qaraabadooda ama asxaabtooda. Hantida noocan oo kale ah waxay noqon kartaa hanti dhab ah, dhigaalka bangiga, gawaarida, danaha sinnaanta, saamiyada, lacagaha iyo noocyada kale ee hantida ama lacagta.
Haddii loo baahdo, waxaan ka caawinnaa macaamiisha sidii ay u fulin lahaayeen dhaxalkooda iyagoo adeegsanaya dacwad maxkamadeed oo laga yaabo inaanay cadaawad haba yaraatee illaa iyo inta dhinacyadu ku heshiin karaan danahooda guryaha.
3. Sharciga Dhismooyinka
Waxaan ka caawinnaa ajaanibta ama ajaanibta wax iibsashada ama iibinta guryaha Shiinaha, guryaha esp ee ku yaal Shanghai halkaas oo aan degan nahay. Waxaan kula talineynaa macaamiishaas iibinta ama nidaamka iibsiga sida annagoo ka caawinayna iyaga sameynta shuruudaha macaamil ganacsi iyo u aragno waxqabadka heshiisyada heshiiska.
Marka la eego iibsiga guriga ee Shiinaha, waxaan ka caawinnaa macaamiisha inay fahmaan xayiraadaha iibsiga ee lagu soo rogay ajaanibta, si loola macaamilo dhinacyada la xiriira oo ay ku jiraan kuwa wax iibiya, kuwa wax iibiya iyo bangiyada iyo wax ka qabashada arrimaha sarrifka lacagaha qalaad ee ku lug leh geeddi-socodka.
Marka la eego iibinta guri ku yaal Shanghai, Shiinaha, kaliya ma caawinno macaamiisha inay shaqo joojiyaan heshiisyada lala galayo iibsadayaasha laakiin waxaan sidoo kale ka caawinnaa iyaga inay u beddelaan iibkooda macaashka sarrifka ajaanibta sida Doolarka Mareykanka iyo silig isku mid ah oo ka baxa Shiinaha illaa waddankooda.
4. Sharciga Shaqada / Shaqaalaha
Halkan waxaan sidoo kale si joogta ah uga caawinaa dadka ajaanibta ah ee ka shaqeynaya Shanghai inay la macaamilaan loo shaqeeyeyaashooda haddii ay jiraan khilaafaadyo sida shaqo ka dhigis aan caddaalad ahayn iyo mushahar bixin iwm
Marka la fiiriyo aragtida eexashada ah ee Sharciga Qandaraaska Shaqaalaha Shiinaha iyo xeerar kale oo aan macquul ahayn, ajaanib badan oo mushaar sare ka qaata Shiinaha, mar haddii uu khilaaf soo kala dhex galo loo shaqeeyaha, shaqaalaha badanaa waxaa looga tagaa xaalad ceeb ah oo ay tahay inay u foorarsadaan ka hor inta loo shaqeeyayaashooda ay ogaadaan in aysan aad uga ilaalinaynin sharciyada shaqaalaha Shiinaha gabi ahaanba. Sidaa darteed, iyada oo la tixgelinayo khataraha noocaas ah ee la xiriira shaqaalaynta shisheeyaha ee Shiinaha, waxaan ku dhiirrigelineynaa ajaanibta ka shaqeyneysa Shiinaha inay la yimaadaan shuruuc sharci ah shirkadooda si looga fogaado in lagu degdego xaalad adag ee Shiinaha.
5. Sharciga Dhaawaca Shakhsiyeed
Waxaan qabanay dhowr kiis oo dhaawac shaqsiyeed ah oo ku lug leh shisheeyaha oo ku dhaawacmay shilalka waddooyinka ama dagaallada. Waxaan dooneynaa inaan uga digno ajaanibta ku sugan Shiinaha inay si feejignaan leh isaga ilaaliyaan dhaawaca ka soo gaara Shiinaha maxaa yeelay marka la eego sharciyada dhaawaca shaqsiyadeed ee Shiinaha, ajaanibta waxay heli doonaan magdhowga ay maxkamadaha Shiinaha ku siiyeen iyaga gebi ahaanba aan la aqbali karin. Si kastaba ha noqotee, tani waa wax ay qaadan doonto waqti dheer in la beddelo.
Kusoo qor warside bilaash ah si aad u hesho badeecadaha ugu dambeeyay iyo macluumaadka dhimista.
Wakiilka Sharciga ee Shirkadda Shiinaha, Shirkadda Sharciga Furitaanka Shiinaha, Shirkadda Sharciga Qoyska ee Shiinaha,